Hiriira mormii irratti Oromoon 40 ajjeefamuu Amnesty International mirkaneesse - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Hiriira mormii irratti Oromoon 40 ajjeefamuu Amnesty International mirkaneesse
Hiriira mormii irratti Oromoon 40 ajjeefamuu Amnesty International mirkaneesse
Oromoon 40 oli hiriira kanarratti woreegamaniiru jedha Amnesty International
Mootummaan Itoophiyaa ummata mirgaa isaaf falmate, lafa isaaf dubbate ukkaamsuudhaaf jecha ‘shororkeessitoota’ jechee waamuu isaa Amnesty International balaaleffate. Amnesty’iin ibsa baase keessatti lubbuun lammii Oromoo 40 galaafatamuu mirkaneesseera.
Mootummaan Itoophiyaa ummata hiriira nagaa bayeen humoota gooli-uumtotaan wolitti hidhata qabu jechuun isaa, eenyuun fa’a akka ta’an maqaa osoo hin dhoofne, fudhatama kan hin qabnee fi tooftaa ummata ittiin ukkaamsan ta’uus Amnesty’iin dubbate.
‘Ummata balaa jireenyaa fi qabeenya isaanii irratti qiyyeeffate ufirraa qolachuuf daanditti bayeen ‘shororkeessitoota’ jechuun mirga yaada ufii ibsachuu irrati balaa guddaa qaba,’ jedhe Muthoni Wanyeki, itti gafatamaan Amnesty International naannawa Baha Afrikaa. Labsiin mootummaan baase,’ Humnoota tika nageenyaa ummata nagaa 40 ol ajjeesan balaaleffachuu dhiisee, daran ummata hiriira nagaa bayu irratti humna daangaa ce’etti dhimma akka bayan hayyame,’ jedhe.
Bara 2014 keessas mormii nagaa wolfakkaata geggeeffame irratti mootummaan humnatti fayyadamuun lubbuu Oromoo hedduu galaafachuus yaadachiiseera, Amnesty International.
Previous articleBarattoonni heddu Baabbichaa fi Inaangotti ajjeefamuu fi hospitaalonni dhiigaan dhiqamuun gabaafame
Next articleMootummaan Ameerikaa ajjeechaan Oromoo irra gayaa jiru yaachisaadha jedha